သင့်လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ရှက်စရာမဖြစ်စေသင့်သည့်အရာ ၁၈ ခု - သတင်း
မကြာသေးမီကယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးများ၏ရည်းစား၏ဘောင်းဘီတိုများကိုစာတန်းထိုးထားသည့် TikTok လမ်းကြောင်းသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Omg ဤသည်ကားအဘယ်နည်း။ ဒါဟာသိသာတကယ်မိုက်မဲခြင်းနှင့်နုရဲ့ငါလက်ခံရရှိအဆုံးအပေါ်မိန်းကလေးအားလုံးတော်ဝင်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီမျှော်လင့်ပါတယ်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့သောမသိဘဲပို့စ်များသည်လူများ၏လိင်အင်္ဂါနှင့်ပတ်သက်သည့်နားလည်မှုနည်းပါးမှုအပေါ်အလင်းပေးသည်။ ယောနိသည်ဤမညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ လိင် - လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုသည့်အရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်လိင်၏အခြေအနေတွင်မဟုတ်လျှင်မည်သည့်အခါမျှမပြောသင့်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်လူအများတို့သည်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါအ ၀ န်းဝန်းကျင်တွင်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းခံစားရသည်။ သင်၏ယောနိကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအောက်ပါကဲ့သို့သောမေးခွန်းများအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်လှည့်ဖျားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်၊ သူမကြည့်လိုက်သောအရာမဟုတ်ပါ၊
ပထမ ဦး စွာ - ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်စေ၊ မကြည့်သည်ဖြစ်စေသင်၏လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ရှက်စရာမလိုပါ။ အမှုအရာပြောင်းလဲလျှင်ဟုတ်ပါတယ်, အချို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ကိုရယူအမြဲကောင်းပေမယ့်ဒီနေဆဲအရှက်ကွဲတဲ့သဘောမျိုးနှင့်အတူမလာသင့်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ၁၀း၉ ခုမှသင်စိတ်ပူနေသည့်အရာသည်အမှန်တကယ်ယောနိကမ္ဘာ၏အလွန်ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကိုသက်သေပြရန်အတွက်သင်ရှုပ်ထွေးမှုကိုရှာဖွေရန်မလိုပါ။
ယော Wolf ကနှင်းဆီပန်းတွေ၊ သက်တံ့ရောင်တွေ၊ သူတို့သည်ယောနိကဲ့သို့အနံ့ခံကြသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ယောနိဘေးရှိအပေါက်တွင်းမှ piss ကိုထုတ်ပစ်သည်။ ထို့ကြောင့် wee တိုင်းကိုမဆေးကြပါက (ဤသည်အလွန်ဆိုးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မပြုသည်) ၎င်းသည်အနံ့သွားလိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည်အဝတ်အစားများအောက်တွင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့်ဖုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒစ်များ၊ အဲဒါကျော်ယူပါ
စွန့်ပစ်ခြင်းစာသားသင်၏အားလုံးအင်္ဂါကောင်းကြောင်းကိုသင့်အားပြောပြရန်သင့်အင်္ဂါဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရ။ သင့်အင်္ဂါဇာတ်၏ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အမှန်စင်စစ်သင့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါ။ ဟုတ်ကဲ့ယောနိသည်စာသားအတိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့သန့်ရှင်းစေသည်။ သူတို့မဆေးကြောဘဲကြာကြာနေရုံဖြင့်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ယောနိသည်ယောနိအမျိုးသားများထက်ပိုမိုထိရောက်သည်။
သွေးပေါင်ချိန်သည်အမျိုးသမီးများစွာအတွက်ရှက်စရာကောင်းသည့်နေရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏစိုးရိမ်ပူပန်တတ်သည်။ Period blood သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်၏လက်ချောင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့အနီရောင်တောက်ပလာပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်၏လည်ပတ်မှုတည်ရှိရာအပေါ် မူတည်၍ အညိုရောင်နှင့်ပန်းရောင်အမျိုးမျိုးထွက်ရှိတတ်သည်။ တခါတရံ၎င်းသည်ကြီးမားသောဖောင်းကွေးမှုများထွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ အဲဒီမှာဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, သူတို့ထဲကအဘယ်သူအားမျှတကယ်တော့သူတို့အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ, စုစုပေါင်းသို့မဟုတ်ညစ်ပတ်ပေရေ။
သင်တိုတို၊ ရှည်လျားသော၊ ဖယောင်းစက္ကူ၊ ရိတ်ခြင်း၊ ပြောင်သောသို့မဟုတ်ချုံပုတ်များကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်သင်၏လိင်အင်္ဂါကိုတစ်စုံတစ် ဦး ထံထုတ်ခေါ်ပြီးသူတို့မှတ်ချက်မပေးခဲ့လျှင် - Wow၊ မင်းရဲ့အ ၀ န်းသည်မင်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်တယ် မင်း ။
သင်၏ဘောင်းဘီတွင်အရောင်ချွတ်ထားသောအညစ်အကြေးသည်သင်၌ရေဒီယိုသတ္တိကြွအင်္ဂါဇာတ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူများလိုအပ်သည်။ တကယ်တော့သင်၏ယောနိသည်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့် pH အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အရောင်ပြောင်းသွားသည့်အခါဖြစ်ပျက်သည် သင်၏လိင်အင်္ဂါ၏ pH သည်ဆိုးဆေးများနှင့်ဓါတ်ပြုပါသည် မင်းဘောင်းဘီပေါ်မှာ။ အားလုံးအရမ်းပုံမှန်။
6. သင်၏ခတ်၏အရွယ်အစား, အရောင်သို့မဟုတ်ပုံသဏ္.ာန်
ယောနိပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်လာ။ ရှည်လျားသောပြင် labia, ရှည်လျားသောအတွင်းပိုင်း labia, lop-sided, ကွာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ် - ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားမှုအများကြီးရှိပါတယ်။ အချို့လူများကသူတို့၏အသားအရေထက်ပိုမိုမိုက်မဲသည်၊ အချို့သည်အနီရောင်၊ အချို့မှာ ပို၍ ခရမ်းရောင်ရှိသည်။ သငျသညျမှသာမန်ရဲ့ဘာပဲလုံးဝအဆင်ပြေသည် - အဆင်ပြေထက်သာ။ ကောင်း၏ - ကအံ့သြဖွယ်ပဲ!
STIs နှင့် STDs များသည်ဤကဲ့သို့သောမညီမညာဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာများဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မလိုအပ်သောအရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ယခုငါလိင်အင်္ဂါနှင့်အတူမည်သူမဆိုနှင့်စကားပြောတာပါ: သင်ကောက်ယူခဲ့ကြပေမည်သမျှအဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းပါနဲ့။ သူတို့ဟာလူသားတွေလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါလက်ခံရမဲ့စွန့်စားမှုအားလုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
အမှားအယွင်းများဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ကာကွယ်မှုကိုအသုံးမပြုခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ၌ပင်ပစ္စည်းပစ္စယများသည်ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်းပါတယ် နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တတ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရလျှင်သင်၏လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များနှင့်ရိုးသားပြီးသင်ကိုယ်တိုင်မှန်မှန်စစ်ဆေးပါကသင်၏ဘဝကိုအရှက်တကွဲဖြစ်စေရန်မလိုအပ်ပါ။
အလားတူပဲ၊ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်က STI အကြောင်းသင့်ကိုရင်ဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုမရှက်ပါနဲ့။ သငျသညျကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုသုံးသည်မဟုတ်လောမပြောပါနဲ့, အိုး wow!, အိုး shit! သို့မဟုတ်အိုးအကြှနျုပျ၏ဘုရား!, အစား: 'စိတ်မပူပါနဲ့, ထိုသို့ရှက်ကြောက်ခြင်းငှါအချည်းနှီးဖြစ်၏။ အဲဒါကိုသင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဖိနပ်တစ်ချိန်ချိန်အခြားခြေထောက်ပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ပြန်အမှန်တကယ်အတူတူတုံ့ပြန်မှုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ကိုသင်စိုစွတ်မှု၏လှိုင်းများပေါ်တွင်ထိုင်နေရာတိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်မည်မျှစိုစွတ်သည်ကိုဤမျှလောက်များစွာသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျစိုစွတ်ဖို့ရုန်းကန်နေတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ lube ထွက်ရရန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘယ်တော့မှမ, ခြောက်သွေ့တဲ့လိင်မှတဆင့်ရုန်းကန်မရကြဘူး။ မည်သူမဆိုသင့်ကိုဤအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မိပါက၎င်းတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစော်ကားမှုအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ရခြင်းကို ပို၍ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အညီအမျှသင်သာမန်လူတစ် ဦး ထက်စိုစွတ်နေလျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
Deon Black မှ Unsplash မှဓာတ်ပုံ
ကိုယ့်ကိုငါတို့အတွက် adderall ရနိုင်
တဆေးကိုရောဂါကူးစက်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် sexy မဟုတ်သောကြောင့်လူအများအပြားသည်အငြင်းပွားမှုများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိကြပါ။ အဲဒါကို Fuck! ဒါဟာတကယ်ဘုံနှင့် sort ဖို့တကယ်လွယ်ကူပါတယ်။ ၎င်းကိုကုသမှုမခံရပါက၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်သင့်အားတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းသို့မခံပါစေနှင့် - ဆေးဆိုင်ကိုသွား၊
ပွဲတစ်ပွဲယောနိ၏ archenemy ။ UTI များသည်အလွန်မသက်မသာဖြစ်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တနည်းကား, ဒီမဆိုအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အတူမလာသင့်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများရှိသည် - လိင်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Fanny လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသီးခြားထားပါ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ သူတို့ဖြစ်ပျက်လာသောအခါဆရာဝန်ထံသွားရန်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။
ဤသည်နှစ်ခုလုံးသည်သင့်အားလာရောက်သည့်အရာနှင့်သင်မည်ကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်ပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဘို့, လူတိုင်းကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဇင်အမျိုးအစားများရှိသည် - ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ clit နှိုးဆွခြင်း၊ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကူညီဖို့သင်အလုပ်တချို့လုပ်နေရင်တောင်ကောင်းပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုအတွက်၊ မင်းဟာမင်းအသံကျယ်နေတယ်၊ ​​တိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ​​နီရဲရဲလား၊ အရှည်ကိုဆန့်နိုင်လား၊ သင်အထွတ်အထိပ်ရောက်သည့်အခါသင်ဘာလုပ်သည်ကိုမလုံခြုံဘဲမနေပါနှင့်။
ထိုအခါ orgasming မဟုတ်န်းကျင်အရှက်ကွဲခြင်းလာပါတယ်။ ယောက်ျားတွေတော်တော်များများက porn ဟာအမျိုးသမီးအော်ဂဇင်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့လမ်းညွှန်လို့ထင်ကြပြီး၊ အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါခုခံကာကွယ်နိုင်လို့မိန်းကလေးတွေအတွက်ဒါဟာအထူးသဖြင့်ပုံမှန်ပါပဲ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင့်ကိုမလာရောက်နိုင်ပါကသူတို့ကိုသင့်အားအရှက်မကွဲစေပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်၏အမှားဟုမယူဆပါနှင့်။ အော်ဂဲနစ်လာနှင့်သွား။ တခါတရံသင်က crack, အခြားအချိန်များတွင်သင်လုံးဝဆုံးရှုံးသည်။ အားလုံးကောင်းပါတယ် သငျသညျထိုအဘို့စိုးရိမ်လျှင်, vibrator ဝယ်ပြီးပတ်ပတ်လည်ကစားပါ။
ကျောင်းမှာပြန်နေရသလိုခံစားရတယ်၊ ဘယ်သူကမှသူတို့မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှဝန်မခံချင်ကြဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာရှက်ရွံ့စရာကောင်းတယ်၊ စံပြကာလကမင်းရဲ့ pantiliner အပေါ်ကျဆင်းသွားတာပဲ။ ဝမ်းနည်းစရာ, ဒီလူအများစုများအတွက်အဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်သင့်အလေးချိန်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိခြင်းသည်သင်၏မွေးဖွားခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။
ကြွက်တက်ခြင်းစို့ တခါတရံတွင်သင်တစ်နေ့တာအတွက်နွေးထွေးသောအရာတစ်ခုကိုအိပ်ရန်နှင့်နေရာချရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်သည်။ ကာလကြွက်တက်ခြင်းရှိသူအားလုံးသည်ဤအရာကိုသိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ မင်းကမင်းမှာမကောင်းတဲ့ကျဉ်းကျုတ်တွေရှိတယ်လို့မင်းကိုပြောတာကဘာဖြစ်လို့အဆင်မပြေတာလဲ။ ဒါကြောင့်အိမ်ကနေအလုပ်သွားလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်သင်ကမသက်မသာဖြစ်နေလို့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုလက်လွှတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆရာကပြောတာဘာကြောင့်လဲ။ လူအများစုကဖျားနာနေတုန်းပဲ၊ သူတို့ကရှက်စရာကိုသက်သာအောင်လုပ်ဖို့ဆင်ခြေဆင်ခြေပေးတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? နိုင်ငံ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ရာသီလာခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရသည် - သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့မဖြစ်ပျက်နေသနည်းဟုဟန်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယောနိလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အနီရောင်နှင့် puffy ရ။ သူတို့ကပဲပွတ်တိုက်ခြင်း, လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပေါတွေအများကြီးမှတဆင့်သွားပြီ။ ဒါကအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်များအောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားရန်မထားပါနှင့်။ ၎င်းအစားပြပါ - သင်၌ကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိသည်ဟုမာနထောင်လွှားသောယောနိသည်ပြသည်။
ဟေ့ ငါတင်းကျပ်စွာလိင်အင်္ဂါနှင့်အတူဤစွဲနေဆဲအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မယုံနိုင်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ယောနိသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ် ၀ င်စားသောယောနိအင်္ဂါဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအမှန်တကယ်ငြင်းခုန်ရန်ကြိုးစားပါက: ငါမူကားငါမခံစားရနိုင်, သူတို့သည်ဖြစ်စေမုသာနေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒစ်ရဲ့သွားပြီထုံနေသောကြောင့်သူတို့ကဆရာဝန်များကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကလေးမွေးသောအခါယောနိသည်ပိုမိုကျယ်လာနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုကြောက်ခံရဖို့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျရုံ fuck ဆိုတဲ့လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ, သင့်လိင်အင်္ဂါရဲ့ဘဝ၏အံ့ဖွယ်အပြီးနောက်နည်းနည်းတက်လျှော့ပေးရေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ bullshit သီအိုရီများကသင့်ကိုစိတ်မပျက်စေပါနှင့်၊
Unsplash ရှိ Daines Graveris မှဓာတ်ပုံ
လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်မှုမှာအလွန်အမင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးသင်မည်မျှတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိကြောင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ဒစ်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုသက်သေပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စမှာနာကျင်မှုဟာ sexy မဟုတ်ပါဘူး၊ နာကျင်ပါတယ်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပြောပါ၊ ၎င်းကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ၊
မိန်းမအားလုံးသည်ယောနိမဟုတ်၊ ယောနိအားလုံးသည်မိန်းမမဟုတ်ပါ။ ယော Wolf ကအမြိုးသမီးတ၏ defining အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပြီဒါပေမယ့်ဒီရုံမကအခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, မမှန်ပါဘူး။ ယောနိသည်သင့်ကိုမသတ်မှတ်ပါ၊ သင်သတ်မှတ်သည်၊ သင်၏လိင်အင်္ဂါသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။
• ယောနိအမျိုးအစား ၉ မျိုးရှိပေမယ့်မင်းမှာဘယ်အမျိုးအစားရှိသလဲ။
• အမျိုးသမီးများ!! အော်ဂဇင်အမျိုးအစားငါးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီမှာဘာတွေလဲ၊
• Teardrops နှင့် East Wests: Boobs အမျိုးအစားကိုးမျိုးရှိပါတယ်